Hiran State - News: Wasiirka Xanaanada Xoolaha dowlad goboleedka Hiiraan State oo sheegay inuu wax ka qabanayo xoolaha ku dabar go’aya abaarta
Wasiirka Xanaanada Xoolaha dowlad goboleedka Hiiraan State oo sheegay inuu wax ka qabanayo xoolaha ku dabar go’aya abaarta
Wasiirka Xanaanada Xoolaha dowlad goboleedka Hiiraan State oo sheegay inuu wax ka qabanayo xoolaha ku dabar go’aya abaarta.
Wasiirka Xanaanada Xoolaha ,dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka Hiiraan State ee Soomaaliya Mudane Siciid Maxamuud Cali “Saciid Duumo” ayaa waxa uu sheegay inuu ku howlan yahay sidii uu wax uga qaban lahaa xoolaha ku dabar go’aya abaarta daran ee ku dhufatay seddexda gobol ee hoos taga Hiiraan State oo kala ah Dhagaxjibis,Deebley iyo Koonfurta Hiiraan .
Wasiirka Xanaanada Xoolaha Hiiraan State Mudane Siciid Duumo , waxa uu sheegay inuu ka shaqeyn doono horumarinta xoolaha iyo nafaqeyntooda , waxaana uu carabka ku adkeeyay in tababaro wasaaradiisa ay u furi doonto xoolo dhaqatada Hiiraan ,iyadoo lala kaashanayo hey’adaha caalamiga .
Mudane Siciid Maxamuud , waxa uu kaloo sheegay mar uu maanta u waramayay shabakadda wararka ee Hiranstate.com , xafiiska Muqdisho inuu u howlgali doono sameynta dhul bacrisan oo balaaran oo daaqsinka ku wanaagsan oo nafaqo leh si ay u korodho tayada iyo tirada xoolaha noocyadooda kala duwan .
Waxa uu ku nuux nuuxsaday wasiirka , in ay keeni doonaan , una qeybin doonaan xoolo dhaqatada daawo waxtar leh oo ka hortaga cudurada xoolaha ku dhaca , si xoolaha ay u yeeshaan ganacsi dhaqaale buuran leh oo il dhaqaale u noqda shacabka iyo dowlad goboleedka Hiiraan State .
Golaha wasiirada DGHS ayaa iyagu tan iyo markii la magacaabay wasaaradkasta ay howsheeda u gudaneysaa sidi la rabay inkastoo wasaaradahii amni soo cewlinta ku shaqada lahaa ay iyagu mar hore u dhaqaaqeen howlahii horyiilay oo ay si lama filaan ah oo waliba awood ah ula waregayaan guud ahaan dhuweynaha Hs iyagoo la gaashanayo shacab Hiiraan intooda nabada iyo kala danbeynta u baahan.
W/diyaariyay : Xafiiska Hiiraan State ee Muqdisho .
· admin on February 07 2011 13:09:01 · 0 Comments · 2026 Reads ·
14,585,554 unique visits